KMN: Pirezadaantii Waldaa maccaa fi Tuulamaa dabalatee namoonni mana HD ABO bulan muraasni hidhaman. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKMN: Pirezadaantii Waldaa maccaa fi Tuulamaa dabalatee namoonni mana HD ABO bulan muraasni hidhaman.
Pirezadaantii Waldaa maccaa fi Tuulamaa dabalatee namoonni mana HD ABO bulan muraasni hidhaman.
KMN:- Onkoloolessa 13/2020
[SBO – Onkoloolessa 13,2020] Yeroo ammaa waraanni PP Autobusii TATAn tokko guutuun fidamee mana Hayyu-duree ABO Jaal Daawud Ibsaa biratti buusamanii jiru. Humna poolisii fi tika naannoo sana jirutti dabalee jechuu dha.